HORDHACA: Manchester City v Swansea- Paul Clement oo Saddex Guul Xiriir ah Doonaya Xili SKY BULE isha Ku Heyso Afarta Sare | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » HORDHACA: Manchester City v Swansea- Paul Clement oo Saddex Guul Xiriir ah Doonaya Xili SKY BULE isha Ku Heyso Afarta Sare
HORDHACA: Manchester City v Swansea- Paul Clement oo Saddex Guul Xiriir ah Doonaya Xili SKY BULE isha Ku Heyso Afarta Sare	Swansea ayaa isku dayi doonta in ay sameyso saddex guul oo isku xigta Premier League marka ay u safrayaan Manchester City, kulan la daawan doono saacadu marka ay tahay 4 : 30 PM.
tababare Paul Clement ayaa saameyn degdeg ah ku yeeshay kooxdan, waxaana uu diirada saari doonaa guulo isku xiga oo Premier League ah markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, Swansea ayaa laga dhaliyay 52 gool xilli ciyaareedkan, taasoo kuu muujineysa in ay tahay mid kamid ah kooxaha ugu difaaca jilicsan Horyaalka Premier League.
kaliya mid kamid ah 14 kulan ee ugu danbeyay ee horyaalka ayay shabaqa ilaashadeena waxaana ay tijaabo adag ku wajihi dooinaan kooxda Pep Guardiola oo 4-0 ku garaacday West Ham arbacadii lasoo dhaafay.
Manchester City ayaa garaacday Swansea lix kamid ah toddobadii kulan ee ugu dambeeyay Horyalka Premier League.
MAXAA KA CUSUB LABADA KOOX?
Willy Caballero ayaa kusoo bilaaban kara goolka kulanka Manchester City Premier League ay kula ciyaareyso Etihad Stadium kooxda Swansea.
Wayeelka Argentine ayaa laga doorbiday Claudio Bravo labadii kulan ee ugu danbeysay City markaasoo shabaqa uu ilaashaday.
Ninka ugu goolasha badan kooxda City Sergio Aguero ayaa laga yaabaa in line-upka kooxda uu ku soo laabto ka dib markii uu kursiga keydka kusoo bilowday kulankii City garaacday West Ham, laakiin waxaa wali dhaawac ku maqan Ilkay Gundogan.
Swansea, macalinkeeda Clement ayaa magcaabi kara saf aan laheyn isbedel si uu u gaaro guushii seddexaad oo isku xigta.
Leon Britton ayaa ku soo laabtay tababarka ka dib dhaawac kubka ah oo uu la maqnaa, waxaana la filayaa inuu ciyaaro kulankaan.
Manchester City ayaa laga badiyay kaliya ka mid ah 11 kulan ee Premier League ugu dambeeyay oo ay wajaheen Swansea City.
Swansea ayaa laga badiyay shanbooqasho ee ugu dambeysay Premier League oo ay tageen Etihad Stadium, waxaana laga dhaliyay 12 gool.
Swansea ayaan ku badinin garoonka Manchester City ee kulan horyaalka ah tan iyo bishii March 1951, waxaana laga wada badiyay 10 kulan oo ay booqdeen tan iyo markaas.
Aguero ayaa dhaliyay labo gool isagoo ku ciyaaraya Liberty Stadium kulankiisii ugu horeysay ee Premier League bishii August 2011, markaasoo keydka uu kaoso kacay.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/hordhaca-manchester-city-v-swansea-paul-clement-oo-saddex-guul-xiriir-ah-doonaya-xili-sky-bule-isha-ku-heyso-afarta-sare/">HORDHACA: Manchester City v Swansea- Paul Clement oo Saddex Guul Xiriir ah Doonaya Xili SKY BULE isha Ku Heyso Afarta Sare</a>